आयुर्वेदका डिजी,पैसा असुल्नैमा बिजी ! – YesKathmandu.com
काठमाडौं, । अख्तियारले कारवाहीको सिफारिस गरेको मान्छेलाई पुरस्कार दिनु कतिको न्याय संगत हो ? नरदेवी आर्युेवेद अस्पतालमा रहँदा विवादमा मुछिएका डा टेकराज पन्थी यस्तै भष्ट्रचारीबाट लाखौं शूभलाभ लिई तिनै भष्ट्रचारीहरुको पक्षमा खुलमखुला लागेको तथ्य भेटिएको छ ।
स्वास्थ मन्त्रीलाई लाखौ नजराना बुझाएर आर्यूवेद विभागको प्रमुख बन्न आएका उनी अहिले त्यही रकम उठाउन अनेक चलखेलमा व्यस्त छन । पन्थीले खुलमखुला आफू महानिर्देशक हुन २२ लाख रुपैयाँ खर्चेकाले उक्त रकम उठाउनका लागि कमिसन उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको आफन्तसँग बताउने गरेका छन् ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. देवकला भण्डारी अवकाश भएपछि ११ तहका डा. वासुदेव उपाध्याय हुँदाहुँदै उनलाई मन्त्रालयमा थन्काई १०औँ तहका पन्थीलाई निमित्त महानिर्देशक बनाइएको थियो । यसको सेटिङ विवादास्पद औषधि ठेकेदार विष्णु सिंखडाले मिलाएको बताउँदै आएका छन् । सोही क्रममा खर्च भएको २२ लाख रुपैयाँ त्यतिबेला आफूले तिरिदिएको सिंखडाले बताउने गरेका छन् । त्यो लगानी मिलाउन सिंखडालाई पन्थीले नियमविपरीत तीन करोडबराबरको औषधि खरिदको ठेक्का दिइसकेका छन् । त्यसबाट केही पैसा मिल्ने र बाँकी कर्मचारी सरुवा तथा अन्य सामान खरिद, तालिमलगायतको कमिसनबाट मिलाउन पन्थी व्यस्त छन ।
यस्कै उपज हो, जथाभावी आयुर्वेद विभागले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई कमिसन लिएर सरुवा गर्ने गरेको भेटिएको । पन्थीले कमिसनका आधारमा कारबाहीमा परेका, समयावधि नपुगेका कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेका विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कविराज अनुजकुमार शाह तीन वर्षअगाडि फुङ्लिङ आयुर्वेद औषधालय ताप्लेजुङमा सरुवा भएका थिए । दरबन्दी ताप्लेजुङमा रहे पनि धादिङको बैरेनीमा औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका शाह दुई / तीन महिनामा एकपटक फुङ्लिङ पुग्थे । लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमा उजुरी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कारबाहीस्वरूप महिना दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हाजिर भए । आइन्दा यस्तो कमजोरी नगर्ने सर्तमा पुनः फुङ्लिङमा काम गर्न पठाइएका शाह एकाएक सम्पर्क्विहीन भएपछि दुई महिनाको हाजिर उतारी स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए । उजुरीपश्चात् अख्तियारले विभागमा तीनपटक ताकेता गरी शाहलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । विभागीय कारबाही गर्छु भनी अख्तियार समक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाएका पन्थीले एक लाख रुपैयाँ कमिसन लिई शाहलाई औषधि पसल रहेको धादिङ सरुवा गरिदिए ।
पन्थीका यस्ता काला कर्तुतहरु यतिमै सिमित छैन । चापागाउँको आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत वैद्य उत्तम विष्टलाई विभागको वैकल्पिक चिकित्सा शाखा टोलीले अनुगमनक्रममा कार्यालय समयमा सीतापाइलामा निजी औषधि पसलमा फेला पारेको थियो । विभागका वैकल्पिक चिकित्सा शाखाप्रमुख डा. मदन बिसी नेतृत्वको टोलीले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभई निजी क्लिनिकमा बसेको, जन्डिसको उपचार गर्ने भन्दै बिरामीको नाइटोवरिपरि लेप लगाएर ठगेको र क्लिनिकमा सेवा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, उनै विष्टलाई डा.पन्थीले कारबाही साटो क्लिनिक पायक पर्नेगरी इचंगुनारायण आयुर्वेद औषधालयमा सरुवा गरे । सोही स्थानमा रहेकी उनकी श्रीमतीलाई बढुवा प्रयोजननिम्ति मागेकै स्थान रसुवामा सरुवा गरिदिए । सरुवाबापत श्रीमान श्रीमतीबाट लाखौं रुपैंया विभागकै आपूर्ति शाखाका सहायक कविराज रामभक्त ढकाल मार्फत असुल उपर गरे । यता,अर्घाखाँचीको डिभर्ना आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत आफ्ना भतिज पशुपति पन्थीलाई निमित्त महानिर्देशक पन्थीले काठमाडौंमा सरुवा गरेका छन् । चापागाउँबाट कारबाहीमा परेका वैद्य विष्टलाई इचंगुनारायण सरुवा गरी रिक्त रहेको उक्त स्थानमा विभागमा धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि आफ्ना भतिज पशुपतिलाई ल्याएका हुन् । गत चैत्रमा ३२ र वैशाखमा ७ जना सरुवा गर्दा उनले मोटै आर्थिक शूभलाभ हात पारेका छन ।
प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीलाई एमालेको औपचारिक प्रस्ताव
एमालेले चार मन्त्रीको टुङ्गो लगायो
३३ हजार धरौटी बुझाउन नसक्दा, नावालक अपराधीसँग बस्न बाध्य
अवैध बिदेशी मुद्रासहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
यस्ता छन आइतबारको क्याविनेटका निर्णयहरु